DIY: निष्पक्षताको लागि गोप्य गुलाब पानी व्यंजनहरु - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
DIY: निष्पक्षताका लागि गोप्य गुलाब पानी व्यंजनहरू
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला हेरचाह oi-Chandana द्वारा चन्दना राव अप्रिल २,, २०१। मा
जे होस्, सबै छाला टोनहरूको आफ्नै आकर्षण छ, डस्की वा हल्का, हामी मध्ये धेरै अझै पनि एक सुन्दर रंगको लागि आतुर छौं।
यो पूर्णतया स्वाभाविक इच्छा हो, र हामीले यो सुनिश्चित गर्नै पर्छ कि हामीले त्यो उज्यालो र चम्किलो छाला पायौं जुन हामी चाहन्छौं।
छाला कालोपन विभिन्न कारणहरू जस्तै पिग्मेन्टेसन, सन्टन, कम स्वच्छता, सुख्खापन, अस्वस्थ आहार, इत्यादिका कारण हुन सक्छ।
अँध्यारो, निर्जीव रंगले तपाईंको दृश्यलाई ठूलो हदमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यहाँसम्म कि मेकअपले डलनेसन फिक्स गर्न असफल हुन सक्छ। त्यसो भए, त्यो चमकदार छाला फिर्ता पाउन महत्त्वपूर्ण छ!
त्यहाँ धेरै प्राकृतिक उपचारहरू छन् तपाईलाई एक राम्रो छाला टोन प्राप्त गर्न सहयोग गर्न। यी रेसिपीहरूमा प्राकृतिक / हर्बल सामग्रीहरू सामेल छन् जुन साइड इफेक्टको कुनै खतरा छैन।
के फलहरू राती खान सकिन्छ?
गुलाब पानी, उदाहरण को लागी, एक यस्तो घटक हो जुन तपाईंलाई राम्रो रंग प्रदान गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ।
गुलाब पानी प्राय: उपलब्ध अवयव हुन्, जसमा असंख्य गुणहरू छन् जुन तपाईंको छालाको लागि लाभदायक छ।
यो तपाइँको छालालाई पोषण दिन र नमी दिनको लागि परिचित छ, जसले गर्दा यसलाई भित्रबाट उज्यालो र स्वस्थ बनाउँदछ। यो असाधारण छाला सेतो गुणको साथ आउँदछ।
बोल्डस्कीले आज केहि कम कम परिचित, तर धेरै नै प्रभावकारी, घरेलु गुलाब पानी रेसिपीहरू प्रकट गर्दछ जुन तपाईंको छालालाई निर्दोष र निष्पक्ष बनाउन सक्छ।
आवश्यक सामग्रीहरू: गुलाब पानी र हल्दी (हल्दी)
लोग्नेमान्छेले के खोज्छन्
गुलाब पानीले तपाईंको छालाको प्राकृतिक पीएच स्तर पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ, यसैले सुख्खापन हटाउँछ। गुलाब पानी र हल्दीको मिश्रणले तपाईंको छाला नरम बनाउँछ, दाग हटाउँछ र निष्पक्ष चमक थप गर्दछ।
हल्डीको २ चम्चा पानीका लागि केही थोपा गुलाब पानी थप्नुहोस्।
पेस्ट बनाउनको लागि सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्।
यो पेस्ट छालामा लागू गर्नुहोस्।
हल्का साबुनले यसलाई कुल्ला।
आवश्यक सामग्रीहरू: गुलाब पानी र कागती
कसरी स्नायु प्रणाली स्वाभाविक सुधार गर्न
यो संयोजनले तपाइँको छालालाई दृश्यात्मक रूपले अझ राम्रो बनाउन र एक्ने फ्रीमा पनि काम गर्दछ। निम्बू एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेन्ट हो जसले छालालाई सेतो बनाउँदछ। यो जीवाणुरोधी गुणहरूको साथ पनि आउँदछ जसले एक्ने र तेललाई कम गर्दछ।
कचौरामा केही गुलाबको पानीमा केही थोपा नीरो निचोल्नुहोस्।
सामग्री राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
मिश्रणमा कटनको स्वाब डुब्नुहोस् र यसलाई छालामा समान रूपमा रगड्नुहोस्।
गुनगुने पानीले छाला धुनुहोस्।
आवश्यक सामग्रीहरू: गुलाब पानी र दही
यो मिश्रण तपाइँको रंग नरम बनाउनका लागि परिचित छ, निष्पक्ष चमक थप्नको अलावा। दही एक प्राकृतिक छाला सेतो एजेन्ट पनि हो। जब गुलाब पानीसँग मिसाइन्छ, जुन एन्टिऑक्सिडन्टहरू समृद्ध हुन्छ, यसले तपाईंको छालालाई आवश्यक पोषण प्राप्त गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
एक कपमा २ टेबल स्पून दही लिनुहोस्।
दहीमा गुलाब पानीको केही थोपा पानी थप्नुहोस्।
सामग्री टाँस्नुहोस् राम्रोसँग टाँस्नुहोस्।
छालामा पेस्टको बाक्लो तह लागू गर्नुहोस्।
सुख्खा नभएसम्म यसलाई छोड्नुहोस्।
हल्का साबुनले छालालाई धुल्नुहोस्।
आवश्यक सामग्रीहरू: गुलाब पानी र दलिया
गुलाब पानी र दलियाको शक्तिशाली संयोजनले तपाईंको छालालाई नियमित प्रयोगको साथ निर्दोष र सुन्दर बनाउन सक्छ। दलियाले तपाईंको छालालाई मृत छाला तह र पिग्मेन्टेसन हटाएर यसलाई अधिक स्मूदी बनाउँदछ।
यसको पाउडर प्राप्त गर्न ब्लेन्डरमा केही दलिया पीस्नुहोस्।
एक कचौरामा पाउडर खाली गर्नुहोस् र गुलाब पानीको केही थोपा थप्नुहोस्।
यसलाई छालामा लागू गर्नुहोस् र हल्का मालिस गर्नुहोस्।
गुनगुने पानीले यसलाई राम्रोसँग धुनुहोस्।
आवश्यक सामग्रीहरू: गुलाब पानी र केसर
दुबै गुलाब पानी र केसर उत्कृष्ट छाला-बत्ती गुणहरू सहित आउँदछन् जुन तपाईंको छालालाई नियमित प्रयोगको दिनहरूमा नै अझ राम्रो बनाउँदछ। थप रूपमा, केसरले तपाईंको छालालाई पोषण प्रदान गर्दछ छालालाई पोषणको साथ इन्फ्युज गरेर र ट्यान हटाएर।
कसरी खाना द्वारा नितम्ब आकार बढाउन
केसरलाई केही घण्टा पानीमा भिजाउनुहोस्।
तरल प्राप्त गर्न ब्लेन्डर प्रयोग गरी केसरलाई कुचल्नुहोस्।
एक कचौरामा केसर तरलमा केही थोपा गुलाब पानी मिलाउनुहोस्।
यसलाई २-30--30० मिनेटसम्म छोड्नुहोस्।
महको साथ आंवला पाउडरको फाइदा
कसरी महिलाको स्तन आकार बढाउन
दक्षिण भारतीय विवाहको लागि दुलही केश
कसरी कुकर केक बनाउने